सुचना/प्रविधि – purnakhabar.com
मृगौला रोगी सविताद्धारा सहयोगको याचना, मनकारीसम्म पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोस्
दुवै मृगौला बिग्रिएर उपचाररत पाँचथर, मिक्लाजुङकी सविता राईले सहयोगको याचना गरेकी छन् । २१ बर्षको उमेरमानै दुवै मृगौला बिग्रिएर जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेकी सविताले आफ्नो जीवन वचाउन सबैसँग आग्रह गरेकी हुन् । अघिल्लो मंगलवार दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सविताले आफ्नो १० महिने छोराको लागिपनि आफु बाँच्न चाहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । सविताका श्रीमान […]
कला साहित्य राजनीति शैक्षिक गतिविधि सुचना/प्रविधि
कसरी पाउँछन् गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता ?
काठमाडौं । संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएका कारण गैरआवासीय नेपालीहरुले यो अधिकार पाएका छैनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन […]
चट्याङ,यसबाटकसरी बाच्ने, चट्याङ परेपछि के गर्ने ?
हाम्रो देशमा चट्याङ लागेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । प्रायजसो न्यानो महिनाहरुमा बिजुली चम्किने र मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने गर्छ । चट्याङको बारेमा हामीले धेरै मिथकहरु सुन्दै आएका छौं । जस्तैः चट्याङ सधैं सबैभन्दा अग्लो वस्तुमा पर्छ वा चट्याङ कहिल्यै पनि एकै ठाउामा दोहोर्‍याएर पर्दैन । तर, यी दुवै कुराहरु सत्य होइनन् । […]
Posted on May 28, 2018 May 28, 2018 Author purnakhabar	Comment(0)
के हो एन्ड्रोइड रुट, कसरी गर्ने? एन्ड्रोइड रुट गर्नुका फाइदा/बेफाइदा
तपार्इंहरु मध्ये धेरैले त सुन्नु भएकै होला ‘एन्ड्रोइड रुट’को बारेमा। एन्ड्रोइड फोन रुट गर्न पाए धेरै फाइदा होला भन्ने सोच्नु भएको होला। यो लेखमा एन्ड्रोइड रुट भनेको के हो? कसरी गरिन्छ? यसका फाइदा र बेफाइदा के छन्? भन्ने सेरोफेरोमा रहेर जानकारी दिन खोजिएको छ। एन्ड्रोइड रुट भनेको एन्ड्रोइड स्मार्ट फोनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनु हो कि, […]
के तपाँइकाे कम्प्युटर ढिला खुल्छ, छिटो खुल्ने बनाउन यसो गरौँ
शर्मिला शर्मा आइटी इन्जिनियर कहिलेकाहीँ कम्प्युटर खुल्न धेरै समय लाग्छ । कम्प्युटर चलाउन ढिलो हुँदा कम्प्युटर चलाउन नै हैरान लाग्छ । कम्प्युटरमा राखेका विभिन्न सफ्टवेयर कम्प्युटरसँगै खुल्ने हुँदा कम्प्युटरले खुल्न समय लिन्छ । हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा खासै ध्यान दिँदैनौँ । जसले गर्दा कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम खुल्नासाथ क्रमैसँग सफ्टवेयर खुल्न थाल्छन् । त्यसकारण कम्प्युटरको स्विच […]
Posted on January 18, 2018 January 23, 2018 Author admin	Comment(0)
समयनुसार प्रबिधिको बिकासले पनि ठुलो फड्को मारीसकेको छ | संचारको दुनियामा दिन प्रतिदिन तिब्र विकास भैरहेको छ | स्मार्टफोन चलाउनेहरु प्राय सबैले आफ्नो मोबाइलमा लक सिस्टम राखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरु आफ्नो फोनको लक खोल्ने पासवर्ड बिर्सन पुग्छन् । यदि यसो भएमा धेरैलाई यो तनावको विषय बन्छ। लक सिस्टमकै कारण कति जनाले त मोबाइल नै परिवर्तन […]